कम कामवासनाको कारण हुने औषधीहरू चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर प्रेस समुदाय कम्पनी भारी खेल चेकआउट औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, समाचार समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> यी औषधीहरूले कम कामवासनाको कारण दिन्छ
यी औषधीहरूले कम कामवासनाको कारण दिन्छ
यदि तपाइँ हालसालै स्थिर भन्दा कम महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा हो। कोरोनाभाइरस महामारीले २ 27% मानिसहरूलाई एक्लो महसुस गरेको छ, र १%% एक अनुसार निराश महसुस गर्दछ। एकलकेयर सर्वेक्षण । त्यसमाथि, १०% ले बढी रक्सी पिइरहेका छन् - र केहि COVID-१ avoid लाई जोगिन आफ्नो महत्वपूर्ण अन्यबाट छुट्टिएर सामाजिक दूरी हुन सक्छन्। यो वास्तविक रोमान्टिक आतिशबाजीको लागि नुस्खा होईन।
त्यहाँ धेरै दैनिक कारकहरू हुन् जसले यौन कार्यलाई असर गर्दछ men पुरुष र महिलाहरूको लागि। तनाव, रक्सीको खपत, र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था स्पष्ट कारकहरू हुन् जसले प्रभाव पार्न सक्छन् तपाईं सजिलै मूडमा कसरी पाउन सक्नुहुन्छ। के तपाइँले महसुस गर्न सक्नुहुन्न भन्ने छ कि तपाइँले लिनु भएको दैनिक गोली पनि कम कामेच्छामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। ओभर-द-काउन्टर उपचार र सिफारिसहरूले सामान्यतया सेक्स ड्राइभलाई असर गर्दछ। दिन प्रति दिन, वा वर्ष-देखि-वर्ष अस्थिर हुन इच्छाको लागि यो प्राकृतिक हो। तर, यदि तपाईं हुनुहुन्छ कहिले पनि हैन निकटतामा अब चासो राख्नु, यो तपाईंको आत्म-सम्मान संग गडबड गर्न वा तपाइँको सम्बन्ध मा समस्या पैदा गर्न सक्छ। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंको कुनै पनि औषधीले तपाईंको यौन जीवनलाई असर गरिरहेको छ भने, यहाँ सुरू गर्नुहोस्।
कम कामवासना के हो?
कम कामवासना सेक्स मा एक कम रुचि हो, यसलाई कम सेक्स ड्राइव, बिग्रेको यौन समारोह, वा hypoactive यौन इच्छा विकार को रूप मा पनि चिनिन्छ। जबकि यो कहिलेकाँही हातमा हातले जान्छ इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषका लागि, ती दुई एउटै कुरा होइनन्। लियो निस्सोला, MD वैज्ञानिक र इम्युनोलजी लेखकका अनुसार सेक्स गर्न चाहने र यौन उत्तेजनाको लागि आवश्यक शारीरिक उत्तेजना (रगत प्रवाह र शारीरिक उत्तेजनाले चालित हुने) बीचमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता रहेको छ। प्राय: जसो औषधीहरूले हराएको कामेच्छाको शारीरिक पक्षलाई असर गर्दछ।
कामवासना भावनाहरूको एक वर्ण हो कि व्यक्ति-देखि-व्यक्ति फरक। यो अधिक सामान्य कुरा हो कि कम बिभिन्न बिन्दुमा सक्रिय हुन्छ। जे होस् यदि तपाइँ व्यस्त हुनमा पूर्ण रूपमा रुचि हराउनु भएको छ (वा यौन गतिविधिमा तपाइँको लागि सामान्य भन्दा कम रुचि राख्नु भएको छ), लामो समय अवधिमा यो समस्याको संकेत हुन सक्छ।
कम कामेच्छाका लक्षणहरू के के हुन्?
यस अनुसार मेयो क्लिनिक , कम कामवासन को लक्षणहरु समावेश:
कति अमेरिकीहरु टाइप २ मधुमेह छन्
यौन गतिविधि को कुनै पनि रूप मा चासो को हानि - एक पार्टनर वा एकल संग
यौन कल्पना वा विचारहरूको अभाव
तपाईंको यौन गतिविधि वा विचारहरूको अभावको बारेमा चिन्तित महसुस गर्दै
यदि तपाईं सहि परिभाषा फिट गर्नुहुन्न, तर तपाईंको सेक्स ड्राइव परिवर्तनको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, स्वास्थ्य कारण प्रदायकसँग यसको कारण के हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्न पर्याप्त कारण छ। के कम मानिन्छ भन्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ ब्याज को सही मात्रा छैन। यदि यो तपाईंको लागि सामान्य भन्दा कम छ भने, यसलाई ठीक गर्न कदमहरू चाल्नु उचित हो।
कम कामवासनाको कारण के हो?
यस्तो लाग्न सक्छ कि कम कामेच्छा निलो बाट निस्कन्छ, चेतावनी बिना, अन्यथा खुशीको सम्बन्धमा। अझै, सेक्स ड्राइभमा परिवर्तनको मूलमा त्यहाँ एउटा मुद्दा हुन्छ जुन निम्न श्रेणीहरू मध्ये एकबाट आएको हो:
औषधि: केहि औषधीहरूले हार्मोनहरूलाई असर गर्न सक्छ जुन इच्छालाई नियमित गर्न मद्दत गर्दछ। अरूले यसलाई प्राप्त गर्न अझ गाह्रो बनाउँछ वा शारीरिक उत्तेजित हुन।
चिकित्सा अवस्था: भर्खरको शल्यक्रिया वा यौन समस्या (जस्तै यौनको दुखाई) ले कम कामवासनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ, तर यौन समारोहसँग सम्बन्धित नभएको विकारहरूले पनि कामेच्छालाई असर गर्न सक्दछ। कम कामवासनासँग सम्बन्धित केही स्वास्थ्य समस्याहरूमा बेचैन खुट्टा सिन्ड्रोम, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, गठिया, क्यान्सर, हृदय रोग, स्ट्रोक, र न्यूरोलॉजिकल रोग समावेश छ।
हर्मोनल परिवर्तनहरू: टेस्टोस्टेरोन स्तर वा एस्ट्रोजेन स्तरमा परिवर्तनहरूले यौन इच्छालाई असर गर्न सक्छ। यो उमेर अनुसार कम टीको विकास गर्न पुरुषहरूको लागि सामान्य हो, र महिलाहरूले क्रमशः गर्भावस्था र रजोनिवृत्तिमा एस्ट्रोजेनमा स्पाइक र डुबकी लिन अनुभव गर्दछन्। हर्मोन थेरापीले केहि हर्मोनल समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
जीवनशैलीका कारणहरू: धेरै मदिरा, धूम्रपान, वा अवैध लागूऔषधको सेवनले सेक्स ड्राइभ कम गर्न सक्छ। एकदम थोरै निन्द्रा, पर्याप्त व्यायाम नभएको, र अस्वस्थ आहार खानु पनि यौन रोगको साथ जोडिएको छ। निम्नमा संक्रमित केहि रसायनहरू कम कामवासनमा योगदान गर्न सक्छ।
मनोवैज्ञानिक मुद्दाहरू: मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, उदासिनता जस्ता, तपाईले एकपलको आनन्द लिनु भएको चीजहरूमा रमाइलो गर्न मुश्किल बनाउँन सक्छ - सेक्स सहित। आधिकारिक निदानको बाहिर, तनाव, कम आत्मसम्मान, कमजोर शरीर छवि, वा यौन दुर्व्यवहारको ईतिहासले कामेच्छालाई असर गर्न सक्छ।
सम्बन्ध समस्याहरु: तपाईंको साथीलाई भावनात्मक रूपमा महसुस गर्नु शारीरिक घनिष्ठताको कुञ्जी हो। यदि तपाईंसँग तर्कहरू छन्, वा तपाईंको पार्टनरमा सञ्चार र विश्वासको कमी छ भने, यसले तपाईंलाई यौनको लागि कम रुचि राख्दछ।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको कम कामवासनाको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ — सामान्यतया एक परीक्षा र मेडिकल समस्याहरूलाई नकार्न परीक्षणको साथ। तपाईको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकले तपाईलाई एक विशेषज्ञलाई सिफारिस गर्न सक्दछ, मनोवैज्ञानिक जस्तो, यदि मानसिक स्वास्थ्य वा सम्बन्ध समस्या शंकास्पद अपराधी हो भने।
कम कामवासनाको कारणले लाग्ने औषधिहरू
यदि तपाइँको यौन चासो मा डुबकी एक नयाँ औषधी संग मेल खान्छ भने, यो एक संकेत हुन सक्छ। औषधीहरू परिवर्तन गर्नु वा उपचार बन्द गर्नु तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन बेडरूममा समस्याहरूको लागि सजिलो फिक्स हुन सक्छ।
डा। निस्कोलाका अनुसार औषधोपचारले कामेच्छालाई दुई मुख्य तरिकामा प्रभाव पार्छ। केही ड्रग्सले शारीरिक लक्षणहरू सिर्जना गर्दछ जसले सेक्स गर्न वा सेक्सको आनन्द लिन गाह्रो बनाउँदछ - जस्तै योनीको सुख्खापन वा रक्त प्रवाह कम हुने जसले इरेक्शनलाई सम्भव बनाउन सम्भव बनाउँदछ - जसले अप्रत्यक्ष रूपमा कामेच्छालाई असर गर्दछ। अरूले हर्मोनहरूलाई असर गर्दछ जुन तपाईंको मूड र सेक्सको लागि इच्छालाई नियन्त्रित गर्दछ।
जब यो औषधिहरूको कुरा आउँदछ, त्यहाँ तीन किसिमका ड्रगहरू छन् जुन कामेच्छामा नकरात्मक प्रभाव पार्दछ। तिनीहरू मध्ये धेरैले प्रभाव पार्दछ किनकि उनीहरूले शरीरमा तीन प्रमुख हार्मोनको स्तरमा प्रभाव पार्दछ: सेरोटोनिन, प्रोल्याक्टिन, वा टेस्टोस्टेरोन, एमडी, सेवानिवृत्त परिवार अभ्यास चिकित्सक, लेखक मेरो बच्चा भएको छ: अब के? तपाईंले सोच्न आवश्यक पर्ने तीन वर्गीकरणहरू न्यूरोलोगिक वा साइकियट्रिक ड्रग्स, मुटु वा कार्डियोभास्कुलर ड्रग्स, र केही विविध औषधिहरू हुन्।
बीसी-एडीएम, सीडीई, फर्म.डी।, सीडीई, स्टेफनी रेडमन्ड भन्छन्, कम कामवासना र यौन रोगको लागि एन्टिडेटप्रेसस औषधीहरू प्राय: जसो औषधी प्रेरित हुन्छ।नियमित रूपमा बिरामीहरुसंग परामर्श लिई यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताको सम्भावित कारण औषधीहरु समीक्षा गर्न को सह संस्थापक हो मधुमेह ।
निम्नलिखित प्रकारका प्रिस्क्रिप्शन औषधिहरूले सेक्स ड्राइभलाई असर गर्न जान्दछन्:
बेंजोडियाजेपाइनमा आधारित एन्टी-फिक्सी ड्रगिनिटीहरू ( Xanax )
एन्टिकोनभल्सेन्ट औषधिहरू (जस्तै, टेग्रीटोल , Phenytoin , फेनोबार्बिटल )
Antidepressants (सहित, एन्टि-मेनिया औषधिहरू, एन्टिसाइकोटिक्स, MAOIs, एसएसआरआईहरू , SNRIs, tricyclic antidepressants)
सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया उपचार (जस्तै फ्लोमैक्स , प्रोपेसिया , प्रोस्कार )
क्यान्सर उपचार (विकिरण र केमोथेरापी सहित)
मुटु र रक्तचाप औषधिहरू (ACE इनहिबिटरहरू सहित, ए-एड्रेनर्जिक ब्लकरहरू, बी-एड्रेनर्जिक (बीटा) ब्लकरहरू, केन्द्रीय कार्यवाहक एजेन्टहरू, डायरेटिक्स, थियाजाइड्स, र स्टेटिनहरू )
हर्मोनल गर्भनिरोधक (जस्तै ओर्थो ट्राई साइक्लेन)
ओपियोइड दर्द रिलिभरहरू (जस्तै भिकोडिन, Oxycontin , र पर्कोसेट)
स्टेरोइड औषधीहरू (एनाबोलिक स्टेरोइड र कोर्टिकोस्टेरोइड सहित)
अति-काउन्टर उपचारले कामेच्छालाई पनि असर गर्न सक्छ। तपाईले के लिदै हुनुहुन्छ भन्ने बारे सचेत हुनु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, डा निस्सोला वर्णन गर्दछन्। किनभने कहिलेकाँही तपाईंले पूरक लिइरहनु भएको छ जुन तपाईंले सोच्नुहुन्न कि यसले कुनै असर पार्नेछ, र त्यहाँ स्पष्ट र स्पष्ट लेबल छैन यसले तपाईंको यौन जीवनमा असर गर्न सक्छ — वा तपाईंको हार्मोनलाई असर गर्न सक्छ। केहि औषधिहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्, जस्तै:
एन्टिफंगलहरू, विशेष गरी केटोकोनाजोल वा फ्लुकोनाजोल
एन्टिहिस्टामाइन्स, सहित बेनाड्रिल ( डिफेनहाइड्रामिन ) र Chlor-Trimeton ( क्लोरफेनिरामाइन )
डा। निस्कोलाका अनुसार वैकल्पिक उपचार, जस्तै मेडिकल मारिजुआना, ले बिभिडोमा केही बिरामीको लागि महत्त्वपूर्ण नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यद्यपि, अरूले विपरित प्रभावको अनुभव गर्छन्। अति-काउन्टरको मतलब यो सुरक्षित छैन। यसको मतलब यो होइन कि यसले तपाइँको जीवनमा कुनै हानिकारक प्रभाव पार्ने छैन, डा निस्कोला भन्छन्। ओभर-द-काउन्टर र प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बीचको नियमनमा भिन्नता छ। मान्छेहरु सोच्दछन् कि अति-काउन्टर हानिरहित र सुरक्षित छ, र कहिलेकाँही यस्तो हुँदैन।
के गर्ने यदि तपाइँसँग कम कामवासना छ भने
पहिलो चरण भनेको तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भ्रमण गर्नु भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि यो तपाईंको सेक्सन ड्राइभलाई असर गर्ने एक मेडिकल समस्या होइन।
१. औषधि परिवर्तन गर्नुहोस्।
अक्सर, त्यहाँ एक समान उपचार छ कि यौन साइड इफेक्ट नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि, केहि एन्टिडिप्रेसन्ट्स, जस्तै मिर्ताजापाइन, बुप्रोपियन, र नेफाजोडोनले कामवासनालाई खासै असर गर्दैन र वास्तवमा यसलाई सुधार गर्न सक्छ, डा। ट्र्याक्सलरका अनुसार। वा, यदि हार्मोनल जन्म नियन्त्रण मुद्दा हो भने, एक गैर-अस्वाभाविक विकल्पले IUD जस्तो काम गर्न सक्दछ। पनि खुराक परिवर्तन एक फरक गर्न सक्छन्।
जब सम्म तपाईं एक चिकित्सक संग परामर्श, छैन केवल तपाईंको औषधी रोक्नुहोस्! रक्तचाप वा अनियन्त्रित उदासीनतामा स्पाइक हुनु कुनै पनि औषधीको साइड इफेक्टको भन्दा यौन कार्यलाई यथोचित बिगार्न सक्छ, डा। रेडमंड भन्छन्। तपाईंको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न सुरु गर्नुहोस् ... र तपाईंले आफ्नो अर्को भेटको लागि पर्खनु पर्दैन, तपाईं जहिले पनि नर्ससँग बोल्न कल गर्न सक्नुहुन्छ।
Sudafed लिए पछि कति बेर म रक्सी पिउन सक्छु
२. अन्तर्निहित अवस्थाको उपचार गर्नुहोस्।
यदि त्यहाँ चिकित्सा समस्या छ, जस्तै कम हर्मोनको स्तरहरू, यसको उपचारले कामेच्छा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। पहिलेदेखि नै टेस्टोस्टेरोनको स्तर कम भएका पुरुषहरूले टेष्टोस्टेरोनलाई प्रतिस्थापन औषधिको रूपमा लिन्छन् जसले राम्रो सेक्स ड्राइभ पाउनेछ, डा। ट्राक्सलर भन्छन्।
त्यहाँ कम लिबिडो भएका महिलाहरूका लागि एक अनुमोदित औषधि छ जुन २०१ in मा ब्रेमेलानोटाइड, वा भ्यालेसी भनिन्छ। यसले केवल कम सेक्स ड्राइव भएका महिलाहरूको लागि मात्र काम गर्दछ जो अहिलेसम्म रजोनिवृत्ति नभएको छ र जसले सेक्स अघि ईन्जेक्शन लिन मन नमान्छ।
Lifestyle. जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस्।
रक्सीको मात्रा घटाउने, व्यायाम बढाउने, र स्वस्थ खाना खाने सबैले हराएको कामेच्छा बहाल गर्न मद्दत गर्दछ। धूम्रपान छोड्नाले पनि रक्तसञ्चार सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, जसले यौन प्रदर्शन र इच्छालाई असर गर्न सक्छ।
Your. तपाईका चिकित्सक वा फार्मासिष्टसँग पूरकहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्।
त्यहाँ धेरै [हर्बल कामोत्तेजकहरू] छन् जुन कमसेकम उचित रूपमा आशाजनक भएको पाइएको छ, डा। ट्र्याक्सलर बताउँदछन्। धेरै जसो टेस्टोस्टेरोनको स्तरलाई प्रभाव पार्दै काम गर्दछन् त्यसैले उनीहरू महिलाको तुलनामा पुरुषहरूको लागि अझ राम्रोसँग काम गर्छन्।
त्यहाँ प्राकृतिक सामग्रीहरू छन् जुन पर्याप्त प्रमाणहरू छन् जुन उनीहरू यौन ड्राइभ, कामेच्छा, र ईडीको साथ मद्दत गर्न सक्छन्, डा। रेडमन्ड सहमत गर्दछन्। मेथी, ट्रिब्युलस, युरीकोमा लाँगिफोलिया (ल Long्ग ज्याक), र प्यानाक्स जिन्सेng सबै तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नको लागि काउन्टर प्राकृतिक विकल्पहरू हुन्। त्यहाँ प्रभावशाली अनुसन्धान अध्ययनहरू छन् जुन दुबै पुरुष र महिला दुबै मा सही सेक्सनमा प्रयोग गरेको बेलामा सुधारिएको यौन समारोह देखाउँदछ।
A. एक चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस्।
जोडी थेरापी, सेक्स थेरेपी, वा व्यक्तिगत मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था समाधान गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ जुन तपाईं औषधीको साथ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
कामवासनामा परिवर्तनहरू चुनौतीपूर्ण छ भावनात्मक र शारीरिक हिसाबले डिल गर्न को लागी चुनौतीपूर्ण छ र प्राय: दोषारोपण नगरी वा भावनालाई चोट पुर्‍याएको बिना कुरा गर्न मुश्किल छ। स्वस्थ यौन जीवन बिताउन छोड्नुहोस्। धेरै कामवासना मुद्दाहरू थोरै लगनका साथ समाधान गर्न सकिन्छ। र यसै बीचमा, इच्छाको अभावको मतलब तपाईले आत्मीयता त्याग गर्नु पर्दैन। तपाईंको पार्टनरको साथ तपाईंको सम्बन्ध निर्माण गर्न जारी राख्नुहोस्, ताकि तपाईं पक्का मैदानमा हुनुहुन्छ जब तपाईं फेरि व्यस्त हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ।
यो रक्सी पिए पछि nyquil लिन सुरक्षित छ
कहिले सम्म तपाइँ गोली पछि बिहान को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ
antidepressant दबाइहरु सामान्यतया मस्तिष्क मा कुन न्यूरोट्रांसमीटर (s) को स्तर लाई प्रभावित गर्दछ?
ऊर्जा पेय झूठी सकारात्मक औषधि परीक्षण कारण हुन सक्छ